आरजु भाउजुको ५ प्रतिशतले क–कसलाई डुबायो ? – Setosurya
आरजु भाउजुको ५ प्रतिशतले क–कसलाई डुबायो ?
मङ्गलबार १४, कार्तिक २०७४
काठमाडौं । ‘दा’ र दाजुले भरिभराउ भएको नेपाली कांग्रेसमा अचेल भाउजु शक्तिशाली बनेकी छन् । भाउजुको जयगानविना कांग्रेसमा टिकट पाउने, मन्त्री बन्नेमात्र होइन स–साना ठेक्का पनि हात लाग्दैनन् । अहिले शक्तिशाली बनेकी भाउजुको आशिरर्वाद पाए कांग्रेसको कल्याण हुने गरेको छ ।
सरकारी काम होस्, मन्त्री नियुक्ति होस्, सभासदमा सिफारिस पर्नुपरोस् वा कुनै खास लाभका पदमा पुग्नका लागि कांग्रेसमा आरजुलाई भेटी चढाउनुपर्ने प्रवित्तिले जिल्लाका पुराना कांग्रेसहरू पनि दिक्क भएका छन् । ‘यो भाउजुप्रवित्तिले अब गलियो, कति गर्ने ? संघर्ष गरेको पार्टीलाई ठूलो बनाएको केही नदेख्ने ? जहाँ ५ प्रतिशत पाइयो त्यहाँ मात्र अवसर दिने चलन बढेको छ’, स्रोतले भन्यो,‘यतिबेला त झन समस्यामा पारिरहेकी छन् ।’
कांग्रेसभित्र भएको ६० र ४० प्रतिशतको भागवन्डाको श्रेय पनि भाउजुलाई जाने गरेको छ । उनले त्यहि ६० प्रतिशतभित्र आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गर्न थालेकी छन् । ‘पैसाले कहिले पनि नपुग्ने परिवार रहेछ, टिकट लिन जाँदा पनि दिनुपर्ने, लिएर जितिसकेपछि पनि बुझाउन जानुपर्ने । कहिलेसम्म बुझाउने ?’, एकजना पुराना कांग्रेसीले भने ।
त्यसो त आरजुको नजिक भएका कारणले नै प्रहरी एआइजी जयबहादुर चन्द आइजीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको कानुनी अड्चन झेल्न कठिन भएपछि आरजुका कारणले नै उनलाई ब्याक गरिएको थियो । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त आरजु नराम्रोसँग हावी भएकी छन् । अहिलेसम्म पार्टीभित्र पदाधिकारी नियुक्ति नगरिनुको कारण पनि आरजुको दबाब रहेको बताइन्छ । त्यतिमात्र होइन नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, नेपाल तरूण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतलाई पनि आरजुले नै सेट गराएको कांग्रेसभित्र चर्चा चलिरहने गरेको छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
माधब नेपाल भन्छन् – ‘संबिधान शंसोधन निर्वाचन पछि’
पाङ्गको स्थलगत रिर्पोट–बाहिर कांग्रेसको किल्ला, भित्र भने वामपन्थीलाई बहुमत
अन्तत : झलनाथ खनाल र वामदेव दुबैजनालाई एमालेले दियो एकै पटक यस्तो खुशीको खबर !
सरकारबाट बाहिरियो मधेशी मोर्चा, भोलिदेखि आन्दोलन गर्ने
ओलीले कांग्रेसलाई भने ‘बुढो रुखमा युरिया र पानी हालेर हरियो बनाउन सकिंदैन’